Sida laga soo xigtay WordPress، laga bilaabo Maarso 14، 2014، waxaa jiray goobo 76،774،818 WordPress oo adduunka ah. Intaa waxaa dheer، وبلاگ های kuwa، jira quwa deggan degaannada kala duwan ama xal loo helo sida Blogger.com. Waxaa ka sii muhiimsan sida blogsku u jiro، intee in le’eg ayey dadku akhriyaan buugaagta.
Warbixintan isla، WordPress ayaa sheegay در:
"در کا بدان 409 milyan oo qof fiiri in ka badan Xogta bilyan ee 13.1 بیل کاستا.
Iyada oo noocyada noocan oo kale ah، waa inay fududdahay inay aqriso akhristayaasha bloggaaga، sax?
Si kastaba ha noqotee، waxaa jira dhowr waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u soo jiidato akhristayaashaas oo mid ka mid ah waxyaabahaas ayaa aa inaad si joogto aa u bixiso waxyaabaha aad ka kooban Haddii akhristaha uu ogyahay inay ku tirakoobi karto maqaal cusub maalin kasta bartaada internetka، markaa waxay u badan tahay inay so so booqdaan bartaada maalin kasta.
واا xaalad qabasho-22
Dhibaatadu waxay ka imaaneysaa milkiilayaasha websaydhada mashquulka ah، kuwaas oo badanaa socodsiiya wax ka badan hal bog، iskudayaya inay ganacsi sii wadaan oo laga yaabo inay xitaa ka shaqeeyaan shaqo banakaaaaaa Waqtigaas kama baxo waqti badan oo lagu qoro qoraallada mareegaha. واا xaalad qabasho-22.
Akhristayaal badan = وقار یار
1 وبلاگ نویسان ayaa noqday iyo sidoo kale waa inuu
2 وبلاگ Qoraalka Mawduuca
3 الگوی جبینتا قیباحه
3.1 ماداکسا وین
3.5 گوناناد شما
4 وبلاگ Qiyaamo laakiin ma jugleeyo
وبلاگ نویسان ayaa noqday iyo sidoo kale waa inuu
اعتبار عکس: r Afrodity
Blogs-gu markii ugu horreysay wuxuu caan ku ahaa ’90s’. Ardayda، hooyooyinka iyo caado-maalmeedku waxay bilaabeen inay qoraalo geliyaan waxkasta oo ay ka bilaabaan iskudayada cuntada sida buugga illaa sida loo quudiyo qoyskaaga wax ka hooseeya 50 $ toddobaadki. Sida waxyaabo badan oo ku xiran internetka، haddii a fikrad fiican tahay، waxay kortaa oo ay u fidaa oo moodeysaa waxyaabo cusub oo xiiso badan. Labaatankii sano ee la soo gaveafay، baloog garaynta ayaa waxyar iska beddelay.
مانتا ، وبلاگ نویسی waxaa loo arkaa inay tahay daruuri ganacsiyada intooda badan iyo habka lagu gaari karo akhristayaasha iyo macaamiisha. Iyada oo tartan aad u badan iyo blogs badan oo halkaas ka baxsan، waxaa ka muhiimsan inta badan blogers leeyihiin niche gaar ah iyo cod xooggan. Qof kastaa wuxuu qori karaa maqaal wuxuuna ku dhejin karaa blog، laakiin boostada ayaa la akhrin karaa، waqtigeeda iyo caawinaad leh akristayaasha؟ Miyuu ka sii gudbi karaa meelaha kale ee maqaarka?
وبلاگ نویسان وای در یک ایزدبلائه iyagoo bixinaya nuxur wanaagsan، محتوا aan laga helin meelo kale oo si degdeg ah oo joogto ah u siiya. تنی واکسای اگتاهای هال لا یاب لی ، لااکیین حیاشادا شانا سی عاد ووو کورتوآیا کاااااااا karta. Foomka hoos ku qoran waa mid ka ka mid ah inaad nuqul ka dhigi karto oo aad horay u soo gashey dashboardkaaga WordPress oo aad u soo qori kartid. Si kastaba ha ahaatee، waxaan sidoo kale burburin doonaa walxo kasta si anan kuu caawino inaadan si dhakhso ah u qorin، laakiin qor si wax ku ool ah si akhristayaashaada aysan u jeclayn kaliya maqaashaada، laakiin aad kawaaaa.
وبلاگ Sida laga soo xigtay Ka feker suuq-geynta IQ، ganacsiyada balooggu ku dhex arki karo ‘126٪ jiilka hogaamiyaha aa oo ka badan ganacsiyada a arki karin. Ku dar intaas xisaabta taas Content Plus la ogaaday taas oo muujineysa in 60٪ dadku ay dareemaan kalsooni badan xagga ganacsiga ka dib markii ay akhriyaan waxyaabo u gaar ah boggaas ‘ganacsiga’ runtiina maaidaaaaaaaaaaaaaaaa rabto inaad meheraddaada ka hesho ilaha khadka tooska ah.
وبلاگ Qoraalka Mawduuca
تاجدار Ka feejignaan
سو کوبا صبابتا و ددولایسید مووودوکان اوو تو گودبی مووودوکا آخریستاها
Qalabyada iyo farsamooyinka si ay u caawiyaan akrista (الگوی Sida این ، اینفوگرافیک ، iwm)
تانى وای اینا كا بكاكان ویكی كی باكسانا iyo wixii ka baxsan wixii qof kale ka baxa
Ka Akri Akhristaha Feker Kama Dambays آه
الگوی جبینتا قیباحه
اعتبار عکس: رندی استوارت
وبلاگ Cinwaankaaga waa mid ka ah qeybaha ugu muhiimsan ee boostadaada. Haddii aad u baahato inaad waqti dheeraad ah qaadatid waxyaabo، abuurista cinwaan gaar ah waa meel fiican oo wakhtigaas la qaato. Si kastaba ha noqotee، xitaa marka ay timaaddo cinwaanno waaweyn، waxaa jira talooyin qaar kaa caawin kara inaad la timaadid mid indho-qabasho ao oo aan si buuxda dib-u-furin gawaarida.
جری کم ayaa ku qoray mawduucyada cinwawana kale ee A-Bood-bixiyeyaasha ayaa abuuray. Wuxuu bixiyaa tusaalooyin 35h oo cinwaanno aad u fiican ah kuwaas oo ku dhaca dareenka akhristaha. Erayada qaarkood ee kugu gaveadhicin kara akhristaha inuu booqdo bartaada oo uu akhriyo maqaalkaaga waxaa ka mid ah:
Sidee loo helaa qadar وeraad ah ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Hordhaca ayaa ah fursadaada inaad akhriska ku soo jiiddo boostada. خز خز Kaowow. تانا واکسا "کو xiraya" akhristahaaga doonaya inuu akhriyo maqaalka integreda kale. Waxaad dooneysaa isaga inuu dareemo inuusan ka fogaaneynin waxa aad qoreyso maxaa yelay waxaa jira wax intaas ka badan oo kaliya geeska.
Waxaa jiray buugaag ku qoran xariiqda furitaanka. Haddii aad barato waxa ka baxsan، waad arki doontaa waxa aan ula jeedo. بوگاگ ، ماکالو ، wargeysyo گوگو … dhammaantood waxay leeyihiin furitaanno furan. Waxaa jira qaabab badan ooad ula qabsan karto xiisaha akrista.
Tirakoob bilowga ah (WA sida aan u furay qodobkan gaarka ah)
Xaqiiqda ah در akhristuhu uusan ogeyn
سوئه آه در akhristaha uu ku fekerayo ama wax su’aalaayo
مارا اوگو هورایسا ، waxaa laga yaabaa in ay caqabad ku noqoto inaad so so qaadato wax xariif ao oo wax akhriya، laakiin badanaa aad ku tababarto waxa fududaanaya inaad ku qorto xariiq furan oo dhalaalaya.
Hordhacdu waa inay sidoo kale akhristaha u ogeysiisaa waxa aad ka hadli doontid qormadan. Xusuusnow inaad rabto inaad ku sasabto iyada si ay u aqriso inta ka hartay، markaa sii quus. Tusaale ahaan: Maqaalkan، waxaad ku baran doontaa sida loo qoro boostada barta internetka qaab caano fudud oo kaa badbaadin doonta waqti iyo dadaal.
اعتبار عکس: kenteegardin
Hadda waxaa la joogaa waqtigii la geli lahaa cilmi baaristaas ama aqoon gaar ah oo aad akhriska ka siin kartaan. Haddii aad qoreyso sida loo doorto naadiga golf-ka saxda ah oo aad liis golfer ku leedahay liistada saaxiibkaaga، waxaad ka heli kartaa talooyin dhowr ah isaga oo ku dar kuwaas qeybtan.
Haddii aadan lahayn aqoon gaar ah، laakiin aad si fudud u ogaatid mowduuca sifiican، waxaad soo saari kartaa xoogaa tirakoobyo iyo xaqiiqooyin ah ka dibna falanqayn ku Samee. Ma jiro qof dunida ka socda oo arrimaha u fiiriya sida aad u eg tahay. Qofna kuma soo aragin khibradahaaga ama "کولاما هادلو" qaab la mid ah kan adiga oo kale ah. Tan ayaa u iftiimin doonta qoraalkaaga. Ha ka baqin inaad shaqsi aaan u aqrisato akhristayaashaada oo aad la wadaagto macluumaadka waqtigaas uu aabihii isku dayay inuu hagaajiyo jikada oo ku dhaweyd inuu ku qarxiyo guriga maxaa yelay wuxu gila آخریستایااا ، گار آهان آکریستایااا barta internetka ، waxay jecel yihiin taabashada shakhsi ahaaneed. Waa waxa ka dhigaya blogging inay si xiiso leo no so so jeitaan. Waa dariiqo laguula xiriiri karo heer kale oo lala gaaro dadka aduunka oo dhan.
Qeybtaan، waa inaad u bandhigta aqristaha aalado gaar ah ama macluumaad. Waxay u fududaan laheyd sida muunad ka dibna sharax ka bixinaysa sida loo adeegsado shaxankaas sida aan ku sameeyay maqaalkaan. Waxay kaloo noqon kartaa:
Sidoo kale، in kasta oo aan ugu yeedho ‘Qaybta 3’، haddii aad u baahan tahay meel dheeri ah، waxaad xaqiiqdii qayb uga noqon kartaa qaybo kala duwan ama hoosaadyo kala duwan. در kasta oo aad ku deg degsan tahay in qoraalladaada la qoro oo aad rabto inaad waqti badbaadiso، waxaad sidoo kale dooneysaa inaad cinwaan ka dhigto gebi ahaanba. Hubso inaad dabooashay xagal kasta. Samee raadis Google ah oo deg deg ah si aad u aragto haddii boggag kale ay so bandhigayaan isla mowduuca oo ogaadaan waxaad bixin karto taas oo ka badan waxa ay bixiyaan.
اعتبار عکس: کریس اولین
Gunaanadku waa fursadda ugu dambeysa ee aad u baahan tahay inaad la hadasho akhristahaaga. Waxaad rabtaa wixii aad sheegtay inaad ku dhejiso. Ganacsiyada qaarkood waxay u isticmaalaan aagtan sidii wacitaan ficil (CTA). Tusaale ahaan، waxaa laga yaabaa inay sheegaan haddii akhristaha uu u baahan yahay caawinaad dheeri ah oo ku saabsan qalabka jikada inuu jiro wadatashi bilaash ah oo la heli karo adigoo gujinaya batoonka midigta. در kasta oo ay tani waxtar yeelan karto، akhristayaashu waa caqli badan yihiin. راه ogyihiin inaad ugu yeedhayso ficil oo isku dayeyso inaad wax ka iibiso.
Maskaxdaa ku haya، ha ka cabsan inaad mararka qaar dulucda mawduuca oo aad ku dhiirigeliso akhristaha inuu horay ugu socdo qorshahooda cusboonaysiinta (ama wax kasta oo mawduuca aad ku qoreyso). Waxaan horay u lahaa akhristayaal farriin ii soo dirto oo aan uga mahadceliyo sida aan had iyo jeer isku dayo inaan iyaga wax ka iibiyo ama anan wax ku riixo hungurigooda. Tani waxay dhisi kartaa kalsoonida waqti ka dib akhristayaasha. هاا ، CTA mararka qaarkood waa mid wax ku ool ah. Taladaydu waaaa kala duwanaado. Adeegso CTA mararka qaar iyo wakhtiyada kale uun ku duub qodobka una ogolow akhristaha inuu go’aansado inuu doonayo inuu ficil qaado. Badhanka midigta ayaa wali jiraya. Xaqiiqdii ma noqon doontid inaad iskaa u horumarisid.
وبلاگ Qiyaamo laakiin ma jugleeyo
Waqtigu waa qodobka milkiilaha ganacsiga / Blogger kasta oo halkaa ka jira. در kasta oo nakhshada kor ku xusan ay kaa caawin karto inaad qorsheyso qoraaladaada oo ay kugu ilaaliso adoo hubinaya inaad daboosho dhammaan qodobbada muhiimka ah، ma aha inay ku beddesho nuqul adag bogga.
Google wuxuu raad ku leeyahay tayada marka uu sito boggagaaga، sidaas darteed xayeysiinta macluumaadka adigoon ku taageerin xaqiiqooyinka ama faahfaahinta gaarka ah waxay kaliya dhaawici doonaan blogkaaga mudada dheer. وبلاگ degdeg آه ، وبلاگ هوشمند ، وبلاگ tayada.
כל הזכויות שמורות לוורדפרס, כל יום 14 במרץ, 2014, ג’יירו גובו 76,774,818 וורדפרס אדוונדה אהה. Intaa waxaa dheer, בלוגים קואיים, waxaa jira kuwa deggan degaannada kala duwan ama xal loo helo page Blogger.com. Waxaa ka sii muhiimsan page blogsku u jiro, ine in le’eg ayey dadku akhriyaan buugaagta.
Warbixintan isla, WordPress ayaa sheegay ב:
"בקא בדאן 409 milyan oo qof פיירי בקא בדאן Xogta bilyan ee 13.1 ביל קסטה.
Sawir lag soo qaaday WordPress.com
Iyada oo noocyada noocan oo kale ah, waa inay fududdahay inay אקריסו akhristayaasha bloggaaga, sax?
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u soo jiidato akhristayaashaas oo mid ka mid ah waxyaabahaas ayaa ah inaad si joogto ah u bixiso waxyaabaha aad ka kooban tahay. Haddii akhristaha uu ogyahay inay ku tirakoobi karto maqaal cusub maalin kasta bartaada internetka, markaa waxay u badan tahay inay soo booqdaan bartaada maalin kasta.
ווה קסאלאד קבאבו -22
Dhibaatadu waxay ka imaaneysaa milkiilayaasha websaydhada mququulka אה, kuwaas oo badanaa socodsiiya שעווה ka badan hal bog, iskudayaya inay ganacsi sii wadaan oo laga yaabo inay xitaa ka shaqeeyaan שאקו bannaanka ah i i. Waqtigaas kama baxo waqti badan oo lagu qoro qoraallada mareegaha. ווה קסאלאד קבאבו -22.
Qoraallo badan oo בלוג אה = akhristayaal badan
Waqti ka yar = maqaal yar oo בלוג אה
1 בלוגים בלוגים של איה נוידיי iyo sidoo kale waa inuu
2 בלוג קוראלקה מוודוקה
3 תבנית Jebinta Qaybaha
3.1 מדקסה וויין
3.3 קייבתא 2 ee Boostadaada
3.4 קייבתא 3 ee Boostadaada
3.5 גנאנאד שלך
4 בלוג Qiyamo laakiin ma jugleeyo
בלוגים בלוגים של איה נוידיי iyo sidoo kale waa inuu
קרדיט צילום: ~ אפרודיטי
בלוגים-gu markii ugu horreysay wuxuu caan ku ahaa ’90 ‘. Ardayda, hooyooyinka iyo caado-maalmeedku waxay bilaabeen inay qoraalo geliyaan waxkasta oo a ka ka bilaabaan iskudayada cuntada side buugga bada side too quudiyo qoyskaaga wax ka hooseeya $ 50 toddobaadki. Sida waxyaabo badan oo ku xiran internetka, Haddii ay fikrad fiican Tahay, Waxay Kortaa oo ay u fidaa oo moodeysaa waxyaabo cusub oo xiiso badan. Labaatankii sano ee la soo dhaafay, baloog garaynta ayaa waxyar iska beddelay.
Maanta, בלוגים waxaa loo arkaa inay tahay daruuri ganacsiyada intooda badan iyo habka lagu gaari karo akhristayaasha iyo macaamiisha. Iyada oo tartan aad u badan iyo בלוגים badan oo halkaas ka baxsan, waxaa ka muhiimsan inta badan bloggers leeyihinin nich gaar ah iyo cod xooggan. Qof kastaa wuxuu Qori karaa maqaal wuxuuna ku dhejin Karaa בלוג, laakiin boostada ayaa la akhrin karaa, waqtigeeda iyo caawinaad leh akhristayaasha? Miuuu ka sii gudbi karaa meelaha kale ee maqaarka?
בלוגרים waa in ay isbeddelaan iyagoo bixinaya nuxur wanaagsan, content to the lag helin meelo kale oo si degdeg ah oo joogto ah u siiya. Tani waxay u egtahay hawl la yaab leh, laakiin haysashada shaan si aad ugu qorto ayaa kaa caawin map. Foomka hoos ku koran waa mid ka mid ah inaad nuqul ka dhigi karto oo aad horay u soo gashey לוח מחוונים WordPress oo aad u soo qori kartid. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo grale burburin doonaa walxo kasta si aan kuu caawino inaadan si dhakhso ah u qorin, laakiin qor si wax ku ool ah si akhristayaashaada aysan u jeclayn kaliya maqaashaada, laakiin aad rabadaoad la lato.
Sida lag soo xigtay Ka feker suuq-geynta IQ Blog, ganacsiyada balooggu ku dhex arki karo ‘126% jiilka hogaamiyaha ah oo ka badan ganacsiyada aan arki karin. Ku dar intaas xisaabta taas תוכן פלוס la ogaaday taas oo muujineysa ב 60% dadku ay dareemaan kalsooni badan xagga ganacsiga ka dib markii ay akhriyaan waxyaabo u gaar ah boggaas ‘ganacsiga’ runtiina ma lihid wax badan ladii kaaaraa wahkaa rabto inaad meheraddaada ka hesho ilaha khadka tooska אה.
בלוג קוראלקה מוודוקה
קייבתא לאבאד בו בוסטאדאדה
Waxa ay dadka kale sameyeyeen
קייבתא סדדקסאד ee בוסטאדאדה
Qalabyada iyo farsamooyinka si ay u caawiyaan akhristaha (כמו תבנית זו, אינפוגרפיקה, iwm)
Ka akhri akhristaha feker kama dambays אה
תבנית Jebinta Qaybaha
קרדיט צילום: רנדי סטיוארט
Cinwaankaaga waa mid ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan ee boostadaada blog. Haddii aad u baahato inaad waqti dheeraad Ah ku qaadatid waxyaabo, abuurista cinwaan gaar a wa wa meel fiican oo wakhtigaas la qaato. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka a timaaddo cinwaanno waaweyn, waxaa jira talooyin qaar kaa caawin קארה inaad la timaadid mid indho-kabasho ah oo aan si buuxda dib-u-furin gawaarida.
ג’רי Low ayaa ku qoray mawduucyada cinwaannada kale ee A-Bood-bixiyeyaasha ayaa abuuray. Wuxuu bixiyaa tusaalooyin 35 אה oo cinwaanno aad u fiican ah kuwaas oo ku dhaca dareenka akhristaha. Erayada qaarkood ee kugu dhaadhicin קארה akhristaha inuu booqdo bartaada oo uu akhriyo maqaalkaaga waxaa ka mid ah:
Xiddooyinka sare ee 10 (ama isticmaal lambar grale) illaa ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
פודהוד קורשהאה ee ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
קלד הא סמין ______________ (ku buuxi maran mawduucaaga)
Sidee loo helaa Qadar dheeraad אה ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Waxaad helaysaa fikradda. Waxaad dooneysaa inaad ku qanciso akhristaha. Waxaad haysataa illaa saddex ilbiriqsi si aad uhesho dareenkiisa iyada oo malaayiin kale oo בלוג אה אה meesha ka baxayaan. Cinwaankaagu wuxuu si dhab ah u tirinayaa.
Hordhaca aya ah fursadaada inaad akhriska ku soo jiiddo boostada. Ka פרווה פרווה. טאני ווה וקסה "ku xiraya" akhristahaaga doonaya inuu akhriyo maqaalka inteeda boale. Waxaad dooneysaa isaga inuu dareemo inuusan ka fogaaneynin waxa aad qoreyso maxaa yeelay waxaa jira wax intaas ka badan oo kaliya geeska.
Waxaa jiray buugaag ku koran xariiqda furitaanka. Haddii aad barato waxa ka baxsan, waad arki doontaa waxa aan ula jeedo. בוגאג, מאקאאלו, גוגו ‘ורגייייו … דהמאמאנטוד ווקסיי לייייייין פוריטאנו פוראן. Waxaa jira qabab badan oo aad ula Qabsan Karto xiisaha akhristaha.
Tirakoob bilowga אה (waa side aan u furay qodobkan gaarka אה)
Xaqiiqda אה ב akhristuhu uusan ogeyn
סועאל אה באכריסטאהא uu ku fekerayo ama wax su’aalaayo
Marka ugu horeysa, waxaa laga yaabaa in a caqabad ku noqoto inaad soo qaadato שעווה xariif ah oo שעווה akhriya, laakiin badanaa aad ku tababarto waxa fududaanaya inaad ku qorto xariiq furan oo dhalaalaya.
Hordhacdu waa inay sidoo kale akhristaha u ogeysiisaa waxa aad ka Hadli doontid qormadan. Xusuusnow inaad rabto inaad ku sasabto iyada si ay u aqriso inta ka hartay, markaa sii quus. Tusaale ahaan: Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa side loo qoro boostada barta internetka qaab caano fudud oo kaa badbaadin doonta waqti iyo dadaal.
קייבתא 2 ee Boostadaada
קרדיט צילום: kenteegardin
Hadda waxaa la joogaa waqtigii la geli lahaa cilmi baaristaas ama aqoon gaar ah oo aad akhriska ka siin kartaan. Haddii aad qoreyso side loo doorto naadiga golf-ka saxda ah oo aad liis golfer ku leedahay liistada saaxiibkaaga, waxaad ka heli mapa talooyin dhowr ah isaga oo ku dar kuwaas qeybtan.
Haddii aadan lahayn aqoon gaar ah, laakiin aad si fudud u ogaatid mowduuca sifiican, waxaad soo saari kartaa xoogaa tirakoobyo iyo xaqiiqooyin ah ka dibna falanqayn ku samee. Ma jiro qof dunida ka socda oo arrimaha u fiiriya side aad u eg טהאי. Qofna kuma soo aragin khibradahaaga ama "kuulama hadlo" Qaab la mid ah kan adiga oo kale ah. Tan ayaa u iftiimin doonta qoraalkaaga. Ha ka baqin inaad shaqsi ahaan u aqrisato akhristayaashaada oo aad la wadaagto macluumaadka waqtigaas uu aabihii isku dayay inuu hagaajiyo jikada oo ku dhaweyd inuu ku qarxiyo guriga maxaa yeelay wuxuu gahakaway inaaway Akhristayaasha, gaar ahaan akhristayaasha barta internetka, waxay jecel yihiin taabashada shakhsi ahaaneed. ווה ווקסה קאה דהיגיה בבלוגים איניי ש xiiso leh noo soo jiitaan. Waa dariiqo laguula xiriiri karo heer kale oo lala gaaro dadka aduunka oo dhan.
קייבתא 3 ee Boostadaada
Qeybtaan, waa inaad u bandhigta aqristaha aalado gaar ah ama macluumaad. Waxay u fududaan laheyd sida muunad ka dibna sharax ka bixinaysa side loo adeegsado shaxankaas side to ku sameeyay maqaalkaan. Waxay kaloo noqon kartaa:
הקוראן של טילמאאהה
קאלון סידו, בקסטה אולו ואגדו ‘קאיבטה 3’, חאדיאאאאאאאא באאהאן טאהיי מיאל דראיי אהה, ווקסאאד קסאיקיידידי קאייב איגא קקאא קאייבו קאלה דואן ama hoosaadyo קאלה דואן. ב- kasta oo aad ku deg degsan tahay in qoraalladaada la qoro oo aad rabto inaad waqti badbaadiso, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad cinwaan ka dhigto gebi ahaanba. Hubso inaad dabooashay Xagal Kasta. Samee raadis Google ah oo deg deg ah si aad u aragto haddii boggag kale ay soo bandhigayaan isla mowduuca oo ogaadaan waxaad bixin karto taas oo ka badan waxa ay bixiyaan.
קרדיט צילום: קריס אולין
Gunaanadku waa fursadda ugu dambeysa ee aad u baahan tahay inaad la hadasho akhristahaaga. Waxaad rabtaa wixii aad sheegtay inaad ku dhejiso. Ganacsiyada qaarkood waxay u isticmaalaan aagtan sidii wacitaan פיקסל (CTA). Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay sheched haddii akhristaha uu u baahan yahay caawinaad dheeri ah oo ku saabsan qalabka jikada inuu jiro wadatashi bilaash ah oo la heli karo adigoo gujinaya batoonka midigta. בקסטה oo ay tani waxtar yeelan karto, akhristayaashu waa caqli badan yihin. דרך ogyihiin inaad ugu yeedhayso פיקסל oo isku dayeyso inaad שעווה ka iibiso.
Maskaxdaa ku haya, ha ka cabsan inaad mararka qaar dulucda mawduuca oo aad ku dhiirigeliso akhristaha inuu horay ugu socdo qorshahooda cusboonaysiinta (ama wax kasta oo mawduuca aad ku qoreyso). Waxaan horay u lahaa akhristayaal farriin ii soo dirto oo aan uga mahadceliyo side aan had iyo jeer isku dayo inaan iyaga wax ka iibiyo ama aan wax ku riixo hungurigooda. Tani waxay dhisi kartaa kalsoonida waqti ka dib akhristayaasha. Haa, CTA mararka qaarkood waa אמצע שעווה ku ool ah. Taladaydu waa inaan kala duwanaado. Adeegso CTA mararka qaar iyo wakhtiyada kale uun ku duub qodobka una ogolow akhristaha inuu go’aansado inuu doonayo inuu ficil Qaado. Badhanka Midigta ayaa wali jiraya. Xaqiiqdii ma noqon doontid inaad iskaa u horumarisid.
בלוג Qiyamo laakiin ma jugleeyo
Waqtigu waa qodobka milkiilaha ganacsiga / blogger kasta oo halkaa ka jira. בקסטה oo naqshada kor ku xusan ay kaa caawin karto inaad qorsheyso qoraaladaada oo ay kugu ilaaliso adoo hubinaya inaad daboosho dhammaan qodobbada muhiimka ah, ma aha inay ku beddesho nuqul adag boggaaga.
Google wuxuu raad ku leeyahay tayada marka uu sito boggagaaga, sidaas darteed xayeysiinta macluumaadka adigoon ku taageerin xaqiiqooyinka ama faahfaahinta gaarka ah waxay kaliya dhaawici doonaan blogkaaga mudada dheer. בלוג degdeg אה, בלוג חכם, בלוג טייאדה.